တို့ ရွာ သာသာယာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တို့ ရွာ သာသာယာ
တို့ ရွာ သာသာယာ
Posted by မောင် ပေ on Sep 20, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Think Different |6comments
အောက်အကြေအရပ်ဆီက လာအခြေစိုက်တဲ့ ရွာသူလေး တစ်ယောက်နဲ့ 
အထက်အရပ်ဆီက လာအခြေစိုက်တဲ့ ရွာသား လူငယ် တစ်ယောက် တို့ 
ရွာထိပ်က ဇရပ်ကြီး မှာ ဆုံဖြစ်ကြတယ်..
အဲ..ဘယ်ရွာလဲ လို့ ၊ မသိဘူး ဆိုရင်တော့
အရင်တစ်ခါ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ဒီလိပ်စာလေး မှာ ၊ တစ်ချက်လောက် အရင်သွားကြည့်စေချင်ပါတယ် နော် ။
ရွာသူလေးက ဖော်ရွှေစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်လာတယ် ။
“ ဟယ်လို..မစ်စတာရွာသား ၊ နီးဟောင်မား ”
လူငယ် က လဲ ဘယ်ရမလဲ ၊ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် နဲ့ ပြန်ပြောရတာပ
“ ဝေ..ဟောင်ဟောင် ၊ ဘိုင်ဒီဝေး ၊ ဟောင်းအရူး ”
ထိုစဉ် ရွာထဲ မှာ ဝါစဉ်ကြီး ဦးပုဆိန် လဲ ရောက်လာပြီး ၊ နားစွန်နားဖျား ကြားသွားဟန်တူသည် ။
“ ဟေး..ဘာတွေ လဲဟ ၊ ဘယ်မှာလဲ အရူး က ”
လူငယ် = “ ကဲကဲ..ဒီက အမ လေး ၊ ကျုပ် တို့ ဗမာလို ပဲ ၊ ကောင်းကောင်းပြောကြတာပေါ့ ၊ မင်္ဂလာပါ ဗျာ..ဒီက အဘ နဲ့အမ တို့ ”
ဘ = “ အေး..မင်္ဂလာပါကွာ ”
မ =“ ဟုတ်ကဲ့ရှင်…မင်္ဂလာပါပဲ တွေ့ ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် နော် ”
လူငယ် = “ ဘယ်လိုတုန်းဗျ…အခုတစ်လော နေရထိုင်ရတာ အေးချမ်းကြရဲ့ လား ၊ စိတ်ချမ်းသာ ကြရဲ့ လား ”
မ = “ အင်း..နေရတာတော့ သိပ်မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ”
ဘ = “ ဘာ..ဒါပေမယ့် လဲ ကွဲ့ ၊ လင်းစမ်းပါဦး..ကလေးမ ရယ် ”
မ = “ ဟိုတစ်လော က ၊ ဒီက ကိုရင် ပြောတဲ့..သူခိုးပူတာ တော့ မပြောတော့ပါဘူး ၊ အခုဟာ က ချာတိတ်တွေ အကြောင်းပြောချင်လို့ ပါ ”
လူငယ် = “ ဘယ်က ချာတိတ်တွေ လဲ ဗျ ”
ဘ = “ ဟုတ်ပ..လုပ်ပါဦး ၊ အဘ လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ပဲ နေတာများတော့ ၊ လုံမလေး ပြောတဲ့ ဟာ ကို မသိရဘူး ဖြစ်နေတယ် ”
မ = “ ဒီလို တော်ရေ…ကျွန်မ တို့ ရွာထိပ် က ချောင်းလေး ကို သိတယ်မလား ၊ တစ်ရွာလုံး ဝိုင်းအားထားနေကြတဲ့ ချောင်းလေ ”
ဘ၊လူငယ် = “ အင်း..အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ”
မ = “ အဲဒီ ချောင်း ထိပ် မှာ ၊ ရွှေကျင်တဲ့ အဖွဲ့ တွေ ရောက်လာတယ်လေ ၊ ကုမ်ပနီ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ဆိုလား ၊ အဲဒါ ချောင်း ရဲ့ ရှေ့ ရေး အတွက် ၊ သူကြီး က သွားတားပါသေးတယ် ၊ ဒါပေမယ့်…ဟိုက သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်၊ အထောက်အထားတွေ နဲ့ ဆိုကလား ၊ သူကြီး လောက်တော့ ဘယ်မူ မလဲ ၊ ပြန်တောင် ဘုတော လွှတ်လိုက်တယ် ၊ သူကြီး လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံး ၊ လက်မှိုင်ချ ပြန်လာရတာပေါ့ ”
ဘ ၊ လူငယ် = “ ဟောဗျာ…အဲဒီလိုကြီးလား ၊ အေးပေါ့လေ ၊ သူတို့ က လည်း ၊ ဒီဂွင်ကို ရဖို့ ဘယ်လောက် ရင်းနှီးပြီး သေသေချာချာ ၊ မလှုပ်နိုင်အောင် အပိုင်လုပ်လာတာလဲ မှ မသိတာနော ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆိုတာကြီး ပါလာတော့ ၊ တို့ လဲ ဘာတတ်နိုင်မလဲ ကွာ ၊ ”
မ = “ အဲဒါမပြီးသွားဘူး တော်..၊ အခု ချာတိတ်တွေ က ၊ သူကြီး အသုံးမကျ လို့ ၊ဘာဖြစ်တယ်… ဘာညာနဲ့ ၊ အော်ကုန်ကြပြီ ၊ရှုပ်ရှက် ကို ခတ်နေတာပဲ ”
ဘ၊လူငယ် = “ ဒါကတော့..၊ သူကြီး နဲ့ ဘယ်ဆိုင်မှာလဲ ၊ သူလဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ၊ ကံကြမ္မာ က ပါလာခဲ့ပြီပဲ ၊ နော ၊ ငါတို့ လုပ်ရမှာက ၊ နောက်ကို ၊ ဒီလိုမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်လာအောင် ၊ တစ်ကယ် ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးကာကွယ် နိုင်မယ့် လူမျိုး တွေ ဖြစ်လာအောင် တို့ ကြိုးစားကြရမှာပေါ့ ကွာ ”
မ = “ နောက်ထပ် ရှိသေးတယ်..တော်ရေ ၊ မောင်နီ က သူကြီးဆီ လာတိုင်တယ် ၊ မောင်နက် က သူ့ အိမ်ရှေ့တံတွေး ထွေးသွားလို့ တဲ့ ”
ဘ = “ ဟမ်…ဒါကတော့ ကွယ် ၊ မောင်နက် မှ မဟုတ်ပါဘူး ၊ လမ်းသွားလမ်းလာ မှန်သမျှ ၊ သူတို့ တံတွေး ထွေးချင်လာရင် ၊ ဖြစ်သလို ၊ လမ်းပေါ် ၊ လမ်းဘေး ထွေးလိုက်မှာပဲပေါ့ ၊ အဲဒါကို အပြစ်မြင် ၊ အပြစ်ရှာ ပြီး လျှောက်အော်နေလို့ က ၊ လူကြားမကောင်းဘူးပေါ့ ”
မ = “ ရှိသေးတယ် ၊ မောင်ပြာ က တစ်စခန်းထတယ် ၊ သူ့ ဘေးအိမ် နား က မောင်ခရမ်း နဲ့ မဝါ တို့ လင်မယား က ၊ လူမြင်မကောင်းလောက်အောင် ကို အရမ်းသောင်းကြမ်း လို့ ဆိုပဲ ၊ မောင်ခရမ်း က မဝါ ကို အပေါ်စီး ကနေ အမြဲ နှိပ်စက်နေလို့ တဲ့ ။ သူကြီး က ဘယ်လို သောင်းကြမ်းလို့ လဲ…လိုက်ပြ ဆိုတော့ ၊ မောင်ပြာ က သူကြီး ကို ခေါ်ပြီး ၊ မောင်ခရမ်း တို့ အိမ်ဘေး မန်ကျည်းပင် ပေါ်ကို တက်ကြည့်ခိုင်းသတဲ့ ”
ဘ = “ ဟ..အဲဒါမှ တော့ ၊ တွေ့ ရတော့ မှာပေါ့ ဟ ၊ သူတို့ ဘာသာ သူတို့ လင်မယား ဘာသာဘာဝ နေချင်သလို နေတဲ့ဟာ ၊ သွားချောင်းပြီး မှ ကွာ ၊ ဘယ်လို ကောင်တွေ လဲ ဟ ၊ တို့ ဆီ မလဲ ၊ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ ကွာ ”
လူငယ် = “ ဟီဟိ…ကျွန်တော့် လို လုပ်လေ ဗျာ ၊ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေဘူး ထင်ရင် ၊ မျက်စိပိတ် ၊ နားပိတ် ထားလိုက်ပေါ့ ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ”
ဘ = “ မင်းပြောသလို နေခဲ့ဖူးတာပေါ့ကွာ ၊ သို့ ပေမယ့် လဲ…ဒီလူတွေ ပဲ ရှိတာ ဆိုတော့က..ဘယ်လောက်မသိချင်ဟန်ဆောင်ဆောင် ၊ သိလာရတာ ကလား..မောင်ရဲ့”
မ = “ ထားပါတော့ လေ ၊ တို့ လည်း စကားကောင်းနေတာနဲ့ ၊ အချိန်တောင် နှောင်းနေပေါ့ ၊ ကဲကဲ…ကျွန်မ ပြန်လိုက်ဦးမယ် တော် ၊ ဘိုင့်ဘိုင် ”
လူငယ် = “ အိုကေ..တာ့တာ ဗျာ ”
ဘ = “ ဆာရိုနာယား…ချဲရီးယို ၊ နောက်လဲ လာခဲ့ကြဦးနော် ၊ အဘ က သတိရနေမှာနော် ၊ မင်းတို့ လေးတွေ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ ကွာ ”
သို့ နှင့် ထိုသုံးယောက် လဲ ရွာထိပ် ဇရပ် ကြီး ဆီမှ အသီးသီး လမ်းခွဲထွက်ခွာ ၊ ပြန်သွားကြကုန် လေသတည်း ။
———————- အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ———————-
Eeeeeeeeeeee တယ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ကိုပေ … ရေးလည်း ရေးတတ်ပါ့ ။
ဟိုဘက်လှည့်ရေးလိုက် ဒီဘက်လှည့်ရေးလိုက်နဲ့ … :D
ဒီသုံးယောက်က ဒူတွေတုန်းဟ… နာတော့ ဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော
မောင်ပေရေ… ဒီလိုပါပဲ လှည့်ပတ်ရေးတော့လည်း ဒီအဖြေပဲ ထွက်တာပဲပေါ့ကွာ…
ကိုပေ့ ပြောတဲ့သုံးယောက်ကဘယ်သူတွေပါလိမ့်နော်။သူ့ စကားနဲ့ သူ့ ပြန်ပြောရဦးမယ်
တခါတလေ အမ်းချေး၊တခါတလေတော့ ဆံညူတဲ့ ရွာပေါ့နော်။ဟုတ်ရဲ့ လား။
နောက်ခါ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်ထဲ တက်ချောင်းတော့မယ်..
တစ်ချို့ ဟာတွေ သိပ်နားမလည်ဘူး..
မေပေါင်ကတော့ လုပ်ပြန်ပြီ … တို့ရွာသားတွေက ခပ်ထူထူတွေပါဆို … ဘာတွေပြောချင်မှန်း မသိဘူး …